अनौपचारिक र औपचारिक समूह - ... छ औपचारिक र अनौपचारिक सामाजिक समूहहरू प्रकृति, गतिशीलता र विशेषताहरु
नियमित संवाद र निरन्तर प्रत्येक अन्य समुदाय समूह भनिन्छ अन्तरक्रिया गर्नुहोस्। त्यहाँ यो घटना अनुपस्थित छ पृथ्वीमा कुनै ठाउँ छ। समुदायको भर मान्छे औपचारिक र अनौपचारिक समूह विभाजित गर्न सकिन्छ कि एक विशिष्ट योजना बनाउन। यी समुदाय प्रत्येक दुई वा बढी मान्छे हुनुपर्छ भित्र, र प्रत्येक अन्य तिनीहरूलाई को प्रभाव आपसी हुनुपर्छ।
औपचारिक समूह - यो अत्यधिक केन्द्रित व्यवस्थापन र उत्पादन प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको छ जो सामान्य टीम, एउटा सानो निजी टोली सिर्जना गर्छ। विशिष्ट कार्य, विशिष्ट कार्यहरू र स्पष्ट उद्देश्य संगठन हो। औपचारिक नभई अनौपचारिक समूह spontaneously उत्पन्न र स्थिति हो।
संगठन नै र यसको सहायकहरूले प्रत्येक पनि एक समूह, जसको सदस्यहरु साधारण मान, मनोवृत्ति, नियम र आचरणको स्तर साझेदारी हो। कार्यकर्ता आफ्नो संगठनको मोल भने उचित व्यवहार। एक साधारण, व्यवहार मान्यता को समझ संग छाप - यो एक औपचारिक समूह हो। टाउको द्वारा र औपचारिक, छ, र दस्तावेज सजाया र अनौपचारिक, पारस्परिक सम्बन्ध मार्फत spontaneously विकास गरेका र कहिल्यै आधिकारिक पहिचान जो - प्रत्येक संगठन को आन्तरिक संचार पनि समूह थपिएको छ।
मतभेद को मापदण्ड द्वारा निम्न विश्लेषण बाहिर गर्न सकिन्छ। औपचारिक समूह - यसको व्यवहार गुण यसको संगठनको आवश्यकता लागि विशेष गरी डिजाइन गरिएको छ कि एक निश्चित काम विवरण को स्थिति असर गर्न सक्छ एक छ, र धेरै प्रभाव मात्र तल माथि बाट विस्तार। समूह को विशेषताहरु स्पष्ट मालिकहरुलाई पनि पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारित संगठन पनि नियुक्त टाउको हुनेछ, आधिकारिक च्यानल मार्फत पहिचान छन्।
अनौपचारिक समूहहरु, spontaneously उत्पन्न उद्देश्य तल माथि देखि प्रत्येक अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रभाव, र, र अक्सर विपरित विशुद्ध अंतर-समूह को आवश्यकता पूरा। अस्थिर विशेषताहरु, चर, सम्बन्ध एक नेता, spontaneously उत्पन्न, र छ भने, यो केवल समूह को इच्छा छ। त्यो औपचारिक र अनौपचारिक समूह लगभग सबै पक्षहरूमा प्रत्येक अन्य फरक छ।
तपाईं समूह को प्रकार निर्धारण अघि, यो समुदाय निर्माण गरिएको छ के जग मा, पत्ता लगाउन आवश्यक छ: यसलाई अनुकूल सम्बन्ध वा उत्पादन हो। कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि समूह सिर्जना लागि आधार संगठन छ। औपचारिक समूह तीन प्रकारका एक हौं सक्छ:
स्टीयरिंग समूह: प्रमुख निर्देशक र उहाँका निकटतम subordinates, पनि टाउको। उदाहरणका लागि, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष-राष्ट्रपति।
यो कार्य पार्टी (वा उत्पादन वा लक्षित): एउटै कार्य बरु सामूहिक भन्दा, आफ्नै, बरु यो योजना, द्वारा प्रदर्शन गर्ने मानिसहरू।
समिति वा सामाजिक संगठन: Intraorganizational समूह विभिन्न विभाग को गतिविधिहरु समन्वय गर्न रूपमा सेट अप, सामान्य बैठक निर्णय छ। त्यहाँ एक स्थायी आधारमा काम समितिहरु छन्, र अस्थायी, एउटा निश्चित कार्य, प्रदर्शन गर्न सुरु
एक औपचारिक संगठन को इच्छा मा स्थापित - यो पनि एक हो सामाजिक वातावरण मानव अन्तरक्रिया लागि सबै प्रकार र अनुसार व्यवस्थापन नियमहरु संग सधैं। यस्तो सामाजिक सम्बन्ध कहिलेकाहीं समग्र भित्र धेरै अनुकूल समूहमा वृद्धि दिन, र सामान्यतया तिनीहरूले नै संगठन छन्। औपचारिक र अनौपचारिक सामाजिक समूहहरू पनि समानता र मतभेद छ।
दुवै सकारात्मक र नकारात्मक - बना समुदायको सबैलाई, आवश्यक प्रभावित छ संचार को प्रक्रिया मा अरूलाई असर र आफूलाई छ। त्यसैले प्रत्येक सदस्य को र व्यक्तित्व लक्षण, र समुदायको भित्र व्यवहार मान्यता गठन। धेरै कडा परिभाषित गरिएको छ जो अधिकार, र एक टीम र एउटा सरकारी एक अनौपचारिक भाग मा निर्भर गर्दछ एक एकल व्यक्ति सम्पूर्ण समूह असर गर्न सक्छ।
लक्ष्य लिएको छ
समुदाय, संगठन भित्र गठन - मान्छे spontaneously केही साधारण लक्ष्य खातिर अन्तरक्रिया र उत्पादन को लागि डिजाइन एक राम्रो तरिकाले लाग्यो योजनामा आधारित छ। तैपनि, संगठन मा औपचारिक र अनौपचारिक समूह धेरै समान छन्। र त्यहाँ र समस्याहरू नेता र वर्गीकरणका रेखामा देखा हुन त्यहाँ हुन सक्छ।
कुनै पनि व्यक्ति आवश्यकता, unmet संगठन र औपचारिक यो involuntary प्रतिक्रिया एक निश्चित योजनामा हुनुहुन्छ - फरक भन्ने अनौपचारिक समूह छ।
एक औपचारिक समूह को उद्देश्य, पनि, सरल र स्पष्ट छ: मान्छे व्यावसायिक चासो, प्रतिष्ठा वा आय खातिर यसलाई मा प्राप्त। को अनौपचारिक समूह को कारण साधारण थप "प्राकृतिक" छ: यो नजिक संचार र चासो साझा चासो, आपसी सुरक्षा, आपसी सहायता र यति मा।
सबै को पहिलो, औपचारिक र अनौपचारिक समूह मा प्रवेश को कारण यो स्वामित्वको लागि सामाजिक आवश्यकता छ। त्यसैले आत्म-प्राप्त, आत्म-दाबी, आवश्यकता द्वारा आत्म-सक्रिय, र तिनीहरूलाई भेट्न वातावरण सिर्जना गर्छ। दोस्रो स्थानमा खोजी र आपसी विश्वास कारण छ। यदि कुनै पनि कठिनाइ मान्छे नेताहरू गर्न भन्दा सहयोगिहरु थप बारी। यी पक्षहरूमा मा छ एक synergistic प्रभाव समूह अन्तरक्रिया को। एक औपचारिक समूह उद्देश्य - स्वस्थ काम टोली, र यसैले अनौपचारिक समूह सिर्जना भएको सम्बन्ध आवश्यक भएमा तिनीहरूलाई मा नियमन गर्दै छन्, साधारण लगाया टाउको।
उदाहरणका लागि व्यक्तिगत वा समूह चासो, हानिकारक अवस्था, भुक्तानी समस्या जोगाउन र यति मा पनि अक्सर एक समूह परिणत। को औपचारिक समूहमा अनौपचारिक सम्बन्ध सामान्यतया cohesion टोली बढाउँछ। अक्सर समूहमा संचार को आधार एक साधारण ब्याज नै नापसंद, संयुक्त आध्यात्मिक मान, साथै विभिन्न प्रकार को प्राप्त जानकारी, आवश्यक छैन केवल उत्पादन हो। र, को पाठ्यक्रम, समूह सिर्जना मा एक विशाल भूमिका एक संगत, आपसी सहानुभूति खेल्छ। यसैले मान्छे एकाकीपनको जोगिन सक्छौं, आफू निकम्मा, निस्सहायपनको भावना र व्यक्तिगत नाटक को अवस्थामा नैतिक समर्थन प्राप्त गर्नुहोस्।
यो अनौपचारिक संगठन सधैं एक छ सामाजिक नियन्त्रण समूह को सबै सदस्यहरु माथि। सबै को पहिलो, यो व्यवहार मान्यता को बलियो बनाउँछ छ। सामूहिक मा परिवर्तन साधारण चासो प्रभावित छ कि शान्तिपूर्ण जीवन, सकारात्मक भावना वा सामान्य अनुभव खतरामा भने, अनौपचारिक समूह सक्रिय सबै औपचारिक शिक्षा संगठन प्रतिरोध हुनेछ।
नेता कुनै पनि संरचना र कुनै पनि औपचारिक समूह अनौपचारिक असंरचित हुन सक्छ। टोलीमा अख्तियार - त्यहाँ आधिकारिक अख्तियारको र अनौपचारिक मा एक औपचारिक नेता हुनेछ। प्राथमिकता को संघर्ष को मामला मा मान्छे मा एक शर्त र कुनै पनि आधिकारिक स्थिति भन्दा लगभग अधिक महंगा राम्रो सम्बन्ध अस्तित्व रूपमा, विजेता भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ। स्मार्ट नेताहरूले यो बुझ्न र ट्रयाक मा अनौपचारिक समूह को ऊर्जा निर्देशन, सामान्यतया - उत्पादन।
अनौपचारिक समूह व्यवस्थापन
सबै समूह शिक्षा आवश्यक गतिशील रूप संग, टोलीमा भित्र अन्तरक्रिया गर्नुहोस्। समग्र धेरै भावनात्मक प्रभाव र अन्तरक्रिया र टोली को कार्यहरू गर्न। प्रभावकारिता औपचारिक समूह वरिपरि अनौपचारिक समूह मनोवृत्ति मा निर्भर गर्दछ। त्यसैले, आफ्नो convergence - कुनै पनि नेता को मुख्य लक्ष्य देखि सँगै समुदाय को सदस्यहरु बीचको सम्बन्ध मा नकारात्मक विकासक्रम गएको, "informals" सकारात्मक उन्मुख हुनेछ, तिनीहरूले सामाजिक उत्पादन ठाउँ मा फिट गर्न सजिलो हुन्छ।
टोली cohesion औपचारिक र अनौपचारिक समूहहरु को चासो को संयोग को परिणाम हो, यस्तो अवस्थामा, श्रम उत्पादकत्व उच्चतम छ। बरु, चासो, र नियमहरू एक बेमेल मा, पनि प्रामाणिक नेता एक कठिन अवस्थामा हुनेछ, सामूहिक संरचना बीचको संघर्ष सधैं उत्पादकत्व वृद्धि लाइ रोक्छ। यो कर्मियों व्यवस्थापन प्रविधी लागि बनाईएको हो कि अनौपचारिक सम्बन्ध मद्दत गर्न सक्छ।
गठन को तंत्र
तपाईं एक औपचारिक समूह योजना छन् भने, अनौपचारिक सधैं आफूलाई संगठित। कहिलेकाहीं यो पनि एक अनौपचारिक समूह अवैतनिक समूह वा गैर-सरकारी संगठनको स्थिति प्राप्त भनेर हुन्छ। प्रत्येक टोली एक सम्पर्क औपचारिक र अनौपचारिक समूह छ र अन्तरक्रिया सकारात्मक र नकारात्मक दुवै क्षणमा छ। स्मार्ट हेड सधैं अनौपचारिक समूहहरु तिनीहरूले हाम्रो कम्पनी लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्ने, सही निपटान गर्न सक्षम।
सामूहिक अनौपचारिक समूहहरु को उद्भव संग सम्बन्धित समस्या, अक्सर गलत अफवाहहरु फैलाउने सम्बन्धी, दक्षता कम परिवर्तन गर्न प्रतिरोध। तर लाभ अधिक रोचक हो: यो उद्यम गर्न लोयल्टी को उपस्थिति, collectivism आत्मा छ। को यदि प्रदर्शन एकदम बढ्ने समूह मान्यता को आधिकारिक स्थापित भन्दा बढी गर्न थालेका छन्। नकारात्मक manifestations मा, यो, राय नेताहरूको विचार सुनेर आधिकारिक पूर्ण जानकारी अफवाहहरु dispelling लड्न imperative छ, र, अनौपचारिक समूह सदस्यहरू निर्णय-बनाउने भाग लिन अनुमति कायम गर्न सकारात्मक सुरुवात।
खोक्रो औपचारिक समूह
यो घटना मानक परिभाषा हुन पनि लचिलो छ। तर, औपचारिक को विशेषता सुविधाहरू सानो समूह, को पाठ्यक्रम, छ। सानो समूह, प्रत्येक अन्य, आफूलाई एक समूह, लगभग सबै सामान्य चासो दुवै को अलग सदस्यहरू रूपमा बाध्यकारी को संकल्प संग निहित बारम्बार अन्तरक्रिया छ जो एक अलग मान्छे को, संघ गर्न। सानो समूह भएका सबै एउटै वस्तुहरु र आदर्श मा आफूलाई को पहिचान छ, भूमिका-वितरण प्रणालीमा भाग लिन। एक सानो समूह एकतामा सबैभन्दा पूरा अर्थमा को interdependence सबै सदस्य cooperates। अपेक्षाकृत सानो पर्यावरण समूह यसको गतिविधिहरु समकक्षप्रदर्शनगर्नुहुन्छ।
दुर्लभ औपचारिक समूह सदस्यहरूको एक लामो समय को लागि संयुक्त कार्यहरू समन्वय गर्न मद्दत गर्छ जो दस मान्छे, गर्न एउटा सानो संख्या मा। यस्तो समूह अविश्वसनीय tenacious छन्। तिनीहरूले मात्र मिलेरको जो लागि काम, तर पुरस्कार संग मिलेर परिणाम प्राप्त छैन। यसलाई त्यहाँ आत्म-affirmation र आत्म-ज्ञान कार्य कि एक मध्यम छ कि सकारात्मक छ एक निश्चित कार्य यहाँ प्रदर्शन बाहेक एकदम उद्देश्य आवश्यकता जो कोहीले छ।
कसले नाजीहरूले र nationalists छन्
"मानव अधिकार को लागि युवा" सफलतापूर्वक "सहनशीलता हप्ताको।" पूरा भएको छ
OPEC: गूढ रहस्य र कार्यहरु आयोजना। OPEC सदस्यहरू - को देशहरूमा सूची
समुद्र मरिरहेका। अर्को के?
सूर्य वास्तवमा गर्दैन नै Warms
सीआईएस मा जो देशहरूमा समावेश छन्: को नजान्ने लागि शैक्षिक कार्यक्रम
Arbat-Pokrovskaya मेट्रो लाइन। को उत्तर पश्चिमी गर्न पूर्व देखि
घर मा निर्वात मालिश के हो?
पिफ पेस्ट्रीबाट पिज्जा
कोका संग बेर जाम - स्वादिष्ट व्यवहार
अंग्रेजी उत्सव सलाद: नुस्खा
बायाँ हातको नम्रता
बनाउन-अप आउनै लागेको शताब्दीमा लागि: को प्रबेश र बहिष्कार
कार्टून - यो .. मैत्री कार्टून। कार्टून कसरी आकर्षित गर्न
तालिका मा चिसो नाश्ता: तस्बिर संग व्यञ्जनहरु
Svetlana Kasyan: जीवनी र काम
एक क्यारियर को लागि फेंग शुई: एक कार्यस्थल बनाओ
केही मिनेट लागि "एन्ड्रोइड" मा एउटा अनुप्रयोग कसरी स्थापना गर्न